ဆန့်ကျင်ဘက်ဂန္ထဝင်အခြေအနေအရလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု (၂၀၁၅) ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း - Your Brain On Porn
J ကိုလိင် Med ။ 2015 Apr;12(4):916-35. doi: 10.1111/jsm.12800.
brom M က1, Laan E ကို, Everaerd W က, Spinhoven P ကို, နှစ်ဦးစလုံး S.
သုတေသနဝယ်ယူပုဂ္ဂလဒိဋ္အကြိုက်နှင့်မကြိုက်မျိုးသုဉ်းရန်အတော်လေးခံနိုင်ရည်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအပေါ်လေ့လာမှုများဆန္ဒရှိဂန္ထဝင်အေးစက်ကြောင့်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုသုဉ်းအဆင့်စဉ်အတွင်းငြိမ်းအေးဘူးဆီသို့လျော့နည်းသွားလိင်အင်္ဂါ arousal နှင့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆန္ဒရှိ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းရန်ဖြစ်နိုင်သမျှခုခံအရေးကြီးသောလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ သို့သော်ဆန္ဒရှိ conditional လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုမျိုးသုဉ်းရန်ခုခံကျယ်ပြန့်သုဉ်းစမ်းသပ်မှုတွေကို အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့ရသေးပါ။
ဤဆောင်းပါးသည်လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်ဆန္ဒရှိ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းရန်ခုခံလေ့လာဖို့ရည်ရွယ်သည်။
တစ်ဦးက differential ကိုအေးစက်စမ်းသပ်မှု conditional လှုံ့ဆော်မှု (CSS) နှင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (USS) အဖြစ်တစ်ဦးနာကျင်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်နှစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းသာ CS (ထို CS +) ကိုဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်းအမေရိကန်ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အေးစက်တုံ့ပြန်မှုဟာမျိုးသုဉ်းအဆင့်စဉ်အတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
penile လုံးပတ်နှင့်အင်္ဂါဇာတ်သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏ ratings ရယူခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန်အော်တိုချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ရန်ပါဝင်သည်ခဲ့သည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည် CS- နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် CS + ပိုပြီးအပျက်သဘောသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းအင်္ဂါဇာတ်သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင်အဆိုပါ CS- တုံ့ပြန်ထက် CS + မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အနိမ့်, အကိုပထမဦးဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လျော့နည်းလိင်နှိုးဆွသောအဖြစ် CS + သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Intriguingly, ယောက်ျား attenuation လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ယောက်ျားအတွက်မသော်လည်းဆန္ဒရှိအေးစက်နာကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖွငျ့သာ, အမျိုးသမီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသက်ရောက်သည်။ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်နှင့်မကြိုက်အတော်လေးမြဲဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ငြိမ်းအေးပါဘူးထိခိုက်စေအေးစက်။
ဆန္ဒရှိကိုက်; မျိုးသုဉ်း; လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုက်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု